शहरी क्षेत्रमा मात्रै सुपथ मुल्यको पसल कमजोर आर्थिक अवस्था भएका उपभोक्ता दोहरोमारमा आश्विन १८, २०७५
जनप्रतिनीधि मस्तिमा, जनता करको शास्तीमा आश्विन १८, २०७५
राजनीतिक भाइरसले ध्वस्त वीरगंज चिनी कारखाना अझै चल्नसक्ने पूर्व कर्मचारीको दावी आश्विन १८, २०७५
फोहरको डुङ्गुर थुपार्ने माईराम पोखरीमा, बन्यो भव्य ग्रिन पार्क पोखरी (फोटो फिचर) कुल साढे ४ करोडको लागतमा चिल्ड्रेन पार्क बनेको हो । पार्कमा वाटर फाउन्टेन, किड्स जोन, ओपन थिएटर, नृत्यगान स्थल, पिकनिङ्ग स्पोट, टेबल टेनिस स्थल, कोर्डिआर्ट, बच्चाहरुका लागी खेल्ने अलग्गै खेल मैदान, साझा घुमघाम गर्ने सिटि म्यानेजमेट लगायतको सुविधा । आश्विन १७, २०७५
अस्ताईन अधिकारकर्मी राजकुमारी उपाध्याय झण्डै २ वर्ष अगाडी लिएको वहाँको अन्तरवार्ताले अझै उर्जा जागरित हुन्छ । यस्तो थियो वहासँग गरिएको कुराकानीको निचोड :- आश्विन ९, २०७५
गर्भवती महिलालाई श्रीमान् र परिवारको साथ अपरिहार्य : डा. लक्ष्मी थापा गुप्ता चिकित्सकलाई चेकजाँच नगराई घर वरिपरिको पसलबाट नै औषधी किनेर खाने खुवाउने चलन पनि समस्या बल्झाउने प्रमुख कारण भएको उनको भनाइ छ । आश्विन ६, २०७५
शिक्षा कि सामाजिक न्याय पहिला ? समाजका आधारभूत संस्थाहरूमा सवै नागरिकको समान अधिकार र कर्तव्यको प्रत्याभूति प्रदानगर्ने, लाभ तथा सामाजिक सहयोगको बोझ समान र न्यायोचित वितरण गर्ने प्रक्रियाको नाउँ नै सामाजिक न्याय हो । भदौ २५, २०७५
९ वर्षिय बालकको फोहरबाटै महिनाको २१ हजार कमाई, कामसंगै महंगो विद्यालयमा पढ्दै संदिप राउत उनको कमाई प्रायः दैनिक नै ५ देखि ७ सय पुग्छ । वीरगन्जस्थित रेल्वे रोडको सडकखण्ड अन्तर्गत दुर्गा हल नजिकै फोहर संकलन गर्दै गर्दा भेट भएका संदिपले भने बर्षात्को समयमा मात्रै थोरै कमाई हुन्छ । होइन भने प्रायः हरेक दिन ५ देखि ७ सय सम्म हुने उनको भनाइ छ । भदौ २५, २०७५
दुईकठ्ठा जमिनले धानेको परिवारमा पानीको कारण थपियो समस्या १२ वर्षको हुदाँदेखि खेती किसानी गर्दै आएका महतो कोईरीले भने, करेसाबारीमा सिचाँईकै समस्याले उत्पादनमा कहिल्यै कमि आएको थिएन । २ कठ्ठा खेतमा बाली लगाएको सुरुवाती दिनमा १० देखि २५ दिनसम्म मात्रै घर बस्नु पर्दथ्यो । हैन भने यतिकै जग्गाको उत्पादनले हामी दुबैजनालाई बेच्न भ्याई नभ्याई हुन्थ्यो । पहिले दिनको १२ देखि १४ सय सम्म यहि जमिनमा उब्जाएको तरकारी बेचेर कमाउँथ्यौं श्रीमती तारादेवी कोईरीले भनिन् । पानी नपाएर उत्पादनै कमी भएकाले अहिले दुबै जनाको कमाई ६/७ सय रुपैयाँमा मात्रै सीमित छ । त्यसका लागी पनि बजारकै तरकारी थोकमा किनेर बेच्नु पर्ने बाध्यता छ । भदौ २२, २०७५
सावधानी नअपनाए आँखाको दृष्टि नै गुम्न सक्छ : डा. पौडेल आँखामा पीडा हुनुका साथै पोलेको, चिलाएको वा केही बिझाएको महशुस भए पनि आँखा रोग लागेको हुन सक्छ । आँखामा धेरै आँसु आउने र बिहान उठ्ने बेलामा आँखाको ढकनी एक आपसमा टाँसिने, आँखाको सेतो भाग सुनिने आँखा पाक्ने रोगका साथमा एलर्जी भयो भने अझ धेरै चिलाउने जस्ता रोगहरु आँखा रोगका लक्षण हुन् । भदौ २१, २०७५
नयाँ सहितामा कार्वाही : असहायलाई व्यवस्थापन कि जेल ! असहायहरू अब नयाँ कानुनले भिख मागे जेल बस्नुपर्ने व्यवस्थाले पहिला अाफुहरूकाे व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग भदौ १८, २०७५
जनविचार : एक त पिडित, त्यसमा पनी न्यायबाट बञ्चित, त्यसमै मुद्धा जिति नै हालेपनि फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाई ! आखिर कहाँ छन् सिस्टममा कमजोरी ? मुद्धा फैसला भईसकेपछि काम सकिएको भनेर बेवस्ता गर्ने प्रवृतीले गर्दा पनि पिडितहरु न्यायँबाट बञ्चित भएका छन । भदौ १३, २०७५
बाध्यतामा श्रम, श्रमिकहरु गरिबीको कारण खट्न बाध्य श्रमिकहरुमा छाला रोग भदौ १२, २०७५
छातीमा लाग्ने रोग दिर्घ रोग हैनन् : डा. गजुरेल ग्रामिण भेगमा अझैपनी दाउँरा प्रयोग गरेर खाना पकाउने, चुरोट, विडि जस्ता उपयोग बढी गर्ने गर्दछ । त्यसको न्यूनिकरण गराउन जरुरी छ । अझै आफ्नो घर—घरमा सरसफाई राख्नुपर्ने जस्ता बानीको विकास गराउँन जरुरी देख्दछु । भदौ १२, २०७५
सिर्सिया नदी : उद्योगका हानिकारक फोहर खोलानालामा, जिम्मेवार निकाय कुन हो अत्तोपत्तो छैन ! औधोगिक करिडोर अन्तर्गतका उधाेगहरूले नेपाल सरकारको मापदण्ड विपरीत उधाेग सञ्चालन गर्दा त्यस वरपरकाे वातावरण प्रभावित हुदै अाएकाे छ । भदौ ३, २०७५